မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာစန်းစန်းမြင့်အောင်၊ ဒုတိယ ဥက်ကဌ ပါမောက်ခဒေါက်တာမာလာ၀င်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာနွယ်နီအုန်း၊ အဖွဲ့၀င် ဒေါ်သန်းသန်းစိန် နှင့် အဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မေတ်တာစမ်းရေမူ
Thu 25 Jan 2018 - 16:27
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့
ထိုင်းရေတပ်ဦးစီးချုပ်၏ဇနီး Mrs. Kessara Pratoomsuwan နှင့် အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသို့ လာရောက်လေ့လာစဉျ။ ၈.၁.၂၀၁၈
Thu 25 Jan 2018 - 16:23
Thu 25 Jan 2018 - 16:20
လယေ်၀းမြို့နယ်ရှိ စမတောင် မဟာပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥယျာဉျ သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း
Thu 25 Jan 2018 - 16:17
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) ရှိ မေတ်တာစမ်းရေမူလတန်းကြိုကျောင်းတွင် ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံစဥ္။ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ နှင့် ၁၄.၁၂.၂၀၁၇
Thu 25 Jan 2018 - 16:15
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မှ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိ အသင်းပိုင်သားဖွားခန်းနှင့် မြိုင်သာယာမူလတန်းကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာထောက်ပံ့စဉျ။ ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၇
Thu 25 Jan 2018 - 16:11
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့
Thu 25 Jan 2018 - 16:07
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (ဗဟို) မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ပြည်သူလူထုအခြေပြု တီဘေီ၀ဒနာရှင်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စီမံချက် ပြည်နယ်အဆင့်ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ။ ၉. ၁၂. ၂၀၁၇
Thu 25 Jan 2018 - 16:04
Thu 25 Jan 2018 - 16:02
မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ကမ်ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူး စက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
Thu 25 Jan 2018 - 15:59